China imoto ekumgangatho ophezulu Flywheel mveliso kunye nabathengisi | USAMUWELI
Igama lemveliso: Ngaphakathi kwiringi yegiya 6CT
Uhlobo lwemoto: Cummins
Inombolo yokufikelela: 3415350 3415349
Iimodeli ezifanelekileyo zemoto: 6CT8.3
Kwisiphelo samandla esiphelo se-crankshaft, oko kukuthi, icala apho ibhokisi yegiya kunye nezixhobo zokwenza umsebenzi zidityanisiwe. Owona msebenzi uphambili we-flywheel kukugcina amandla kunye ne-inertia ngaphandle kokubetha kwamandla kwenjini. Kwinjinjini enezibetho ezine, kuphela ngamandla okufunxa, ukuxinezela, kunye nokuphelisa ukubethwa ngesibetho esinye kuvela kumandla agcinwe kwi-flywheel. Imali eseleyo iyalungiswa ngokuchanekileyo. Ukulinganisela kwe-injini ikakhulu kuxhomekeke kwibhloko eseleyo kwi-shaft. Umatshini-cylinder enye has a shaft ekhethekileyo.
I-flywheel inomzuzu omkhulu we-inertia. Kuba umsebenzi wesilinda nganye yejini awusasebenzi, isantya senjini naso siyatshintsha. Xa isantya senjini sikhula, amandla e-kinetic e-flywheel ayanda, agcina amandla; xa isantya senjini sincipha, amandla e-kinetic e-flywheel ayancipha, ekhulula amandla. I-flywheel inokusetyenziselwa ukunciphisa ukuhla kwesantya ngexesha lokusebenza kweinjini.
Ifakwe kwisiphelo esingasemva senjini kwaye ine-inertia ejikelezayo. Umsebenzi wayo kukugcina amandla enjini, woyise ukuxhathisa kwamanye amacandelo, kwaye wenze i-crankshaft ijikeleze ngokulinganayo; qhagamshela i-injini kunye nokuhanjiswa kwemoto nge-clutch efakwe kwi-flywheel; kwaye uqale Injini iyabandakanyeka ukulungiselela ukuqala kwenjini. Kwaye kukudityaniswa kwe-crankshaft position sensing kunye nesantya sokuziva kwesithuthi.
Kwisibetho samandla, amandla adluliswa yi-injini kwi-crankshaft, ukongeza kwimveliso yangaphandle, inxenye yamandla ifunxwa yiflywheel, ukuze isantya se-crankshaft singanyuki kakhulu. Kwimivumbo emithathu yokukhupha, ukutya kunye nokucinezela, i-flywheel ikhupha amandla ayo agciniweyo ukubuyekeza umsebenzi osetyenziswe zezi zibetho zithathu, ukuze isantya se-crankshaft singanciphisi kakhulu.
Ukongeza, i-flywheel inemisebenzi ilandelayo: i-flywheel yinxalenye esebenzayo ye-clutch clutch; Iifowuni zentsimbi ye-flywheel yokuqalisa injini ifakwe kwi-flywheel rim; uphawu lwendawo efileyo oluphezulu lukrolwe kwi-flywheel yokulinganisa ixesha lokucoca okanye ixesha lokufaka inaliti, kunye nokulungelelanisa ukucocwa kwevalve.
I-flywheel yemoto ekumgangatho ophezulu:
Igama lemveliso Ngaphakathi ring ring 6CT
Uphawu lwemoto Cummins
Inombolo yokufikelela 3415350 3415349
Iimodeli ezifanelekileyo zemoto 6CT8.3
Egqithileyo Uluhlu olupheleleyo lwee-crankshafts zeemoto zeCrankshaft
Okulandelayo: I-crankshaft eyomeleleyo yemoto ye-Isuzu4BD1
Icandelo leenqwelo ezizenzekelayo
Icandelo leeNjini zeMoto
Icandelo leNxalenye yeMoto
Icandelo leNxalenye yeeNjini